Dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Hir Shabeelle Oo ka socda Buuloburde. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Hir Shabeelle Oo ka socda Buuloburde.
On Dec 3, 2019 347 0
Wararka naga soo gaaraya degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in maanta uu halkaasi ka billowday dibad bax weyn oo ay hogaaminayaan odayaasha dhaqanka islamarkaana ay kaga soo hor jeedaan Siyaasadda Maamulka Hirshabelle.
Dibad-baxayaasha oo watay boorar ay ku xardhan yihiin halkudhegyo ka dhan ah maamulka uu hogaamiye Waare, ayaa waxay cod dheer ku sheegayeen ineysan aqbalayn gudoomiye cusub oo uu Wasiirka Gudaha ee Hirshabelle usoo magacaabay degmada.
Markii ay dibad-baxyadu xoogeysteen, waxaa ku baxay ciidamada Jabuuti kuwaasoo xabado ku riday dad weynaha sidoo kalana xabsiga u dhaadhiciyay qaar kamid ah Odayaashii dhaqanka ee hormuudka ka ahaa isku soo baxa.
Goob joogayaal ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in odayaasha la xiray ay gaarayaan sadax xubnood, waxaana ciidanka Jabuuti oo halkaa looga yaqaano Hiil-Gumeysi, lagu eedeeyay iney si xun ula dhaqmeen duqeyda.
Odayaasha la xiray ayaa horey farriimo ugu diray hogaanka Hirshabelle, una sheegay ineysan marnaba aqbalayn Gudoomiyaha cusub. Dad weynaha ayaa aad u kacsan, ciidamada Jabuutina waxay ku goodiyeen iney leynayaan ciddii kasoo ag-dhawaata xeradooda, lamana oga sida uu xaal ku dambeyn karayo.
Jabuutiyaanka ayaa dhibaato badan ku haya bulshada Buulo-burde. Dhacdooyinka mahadhada ah ee ay geysteen waxaa kamid ah iney muuqaalada marar badan ku faafiyeen muuqaallo anshax darro ah oo ay ka duubeen qaar kamid ah haweenka halkaasi ku dhaqan.